ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5Long ကအဝေးသင်ဆက်ဆံရေးဆက်လက်တည်ရှိရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ – ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Edition ကို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 25 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နွေရာသီအချိန်ကျောင်းသားတစ်ဦး၏တည်ရှိမှုဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. အဲဒီအကြောင်းသည်မှာသံသယမရှိပါ. သင်သည်ကျောင်း၏အလွန်အဖြစ်မှန်အကြောင်းမေ့လျော့နေရ, အနည်းငယ်ဖြေလျော့, သင့်ရဲ့ Tan အပေါ်ရ, အုန်းသီးထဲကအ fruity အဖျော်ယမကာမသောက်, နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်မွေးရပ်ဇာတိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်. ဒါဟာအားလုံးအမှန်တော်တော်ကြီးကျယ်သောအသံ.
တသေးငယ်သောအသေးစိတ်ကလွဲလို့ ... သင်မပြည့်စုံခံစားရ. သင့်အနေဖြင့်ရေခဲမုန့်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချွန်သောကတော့တွေလိုပဲ. ဒိန်ခဲမပါဘဲပီဇာလိုပဲ, တစ်ဦးပျက်စီးဘောလုံးကိုမပါဘဲ Miley Cyrus နဲ့တူ, သင့်ရဲ့ Clyde မပါဘဲတစ်ဦးအထီးကျန် Bonnie.
ငါသည်သင်တို့၏ကြားတွင်အမွှာကွဲကွာလျှက်အကြောင်းပြောနေတာမဟုပ်ဘူး,; ကျွန်မက "ခရီးဝေးခွဲခြာ" အဖြစ်လူသိများဆက်ဆံရေးအတွက်ခက်တဲ့အချိန်ကိုရည်ညွှန်းတာပါ. သင့်ကိုနှစ်သက်နှင့်အတူကျောင်းမှာရှစ်လအတွင်းအံ့ဩဘွယ်အဖြုန်းပြီးနောက်, သင်သည်နှစ်ခုစလုံးအထူးမီးပွားကိုထိန်းသိမ်းရင်းသင့်အိမ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌ထံတော်သို့ပြန်လာဆိတ်ကွယ်ရာဖြစ်ခြင်း၏ကြိုးသင်ယူဖို့ရှိသည်.
သင်ကလွယ်ကူစေခြင်းငှါ၎င်းကျောင်းတကျောင်းကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပြီးသောအချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုလာမည့်တံခါးကိုချိန်းတွေ့ခြင်းခံရ, သို့မဟုတ်သင်ကီလိုမီတာအားဖြင့်ကွဲကွာစေမည်အကြောင်း, သမုဒ္ဒရာထဲ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်တိုက်ကြီး. ဒါဟာအချိန်များတွင်ခက်ခဲတဲ့ထပြီးကစာသင်နှစ်သင်တန်းကျော်ထွင်းထုခ​​ဲ့ connection ကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောလုပ်ရပ်င်.
ကိုယ်ကသာသူတို့ဆက်ဆံရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးဘယ်သူနောက်ဆုံးစေမည်ဟုအံ့သြစရာ. ဝိညာဉ်တော်သည်. Heck ဒီနီးကပ်လွန်းအကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုသွား. နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအချင်းချင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖြစ်ခြင်းမအမြဲမပြတ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏အဆင့်မြှင့်သဘောမျိုးနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှကွာရှညျခံသစ္စာရှိမှုလိုအပ်ပါတယ်.
အားလုံးအကြီးအနည်းပညာ၏အားသာချက်ကိုယူ, ပစ္စည်းတွေနဲ့ gizmos.
ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ပျူတာများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေထိုင်, cell phones နဲ့နေရာအနှံ့နည်းပညာ. နောက်ကျောကလုံးဝအခမဲ့များအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူနဲ့မှဒီနေ့ခေတ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ Skype ကို ... ပဲတယ်လီဖုန်းအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပဌနာဖို့ကံဇာတာကုန်ကျသောနေ့၌. ကျနော်တို့ကလွယ်ကူရှိသည်, ဒါကြောင့်တကယ်မရှိဆင်ခြေဆင်လက်ရှိသင့်သည်. နည်းပညာကိုအသုံးပြုလိုတဲ့ကိရိယာကောင်းတခုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲစာတိုပို့စကားလက်ဆုံရှိမရှိ, ဖုန်းကိုကျော်ပြောနေတာ, ထိုမရေမတွက်နိုင်သောလူမှုရေးမီဒီယာများသို့မဟုတ် Skype ကိုတဦး. အဲဒါကိုအသုံးပြုပါနဲ့မကြာခဏကိုအသုံးပြုရန်.
သင်နှင့်သင့်သိသာထင်ရှားသောအခြားအချို့ကိုသင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်မှုကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးတို့အကြားမှာဝေးဝေးရှောင်ပါ. တကယ့်စက္ကူနှင့်တကယ့်ကိုသုံးပါနှင့်ကလောင်စာတစ်စောင်အဟောင်းခေတ်လမ်းစေလွှတ်မည်, သူတို့အိမ်၌အပ်ပန်းပွင့်နဲ့ကိုယ့်ကိုနှစ်သက်အံ့သြသွားပါ (အရေအတွက်အားရည်ညွှန်း2တစ်ဦးကနုတ်ပန်းခက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှအွန်လိုင်းအမိန့်) ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒါမှမဟုတ်ဂန္ထဝင်အံ့အားသင့်စရာအလည်အပတ်ခရီးပြုပါ. သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဦးထုပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်တချို့စစ်မှန်တဲ့မူရင်းကိုပြသ.
သင်တို့သည်ဤမျှကြာမြင့်စွာအဘို့ခွဲမည်ဖြစ်သောကြောင့်, သင်ကခရီးစဉ်ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အချို့ Adventures အပေါ်သွားဘူးဆိုရင်ကြမည်မှာသေချာပါသည်စူပါအထူးဖြစ်လိမ့်မည်. ငါ Notebook တွင်ကနေမိုးရွာကြောင်းရင်ခုန်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟု ဆို. မဟုပ်ဘူး,, ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးနီးစပ်လိမ့်မည်.
ya ကအချိန်များတွင်ခက်ခဲရစေခြင်းငှါသင်တို့ကိုသန္ဓေသားအနေအထားနှင့် whimper တက်ခွေချင်လာလိမ့် (ငါရှိပါတယ်- ရှက်ကြောက်ခြင်းမ) ဒါပေမယ့်အကွာအဝေးလျှို့ဝှက်စွာကျန်းမာကြောင်းသတိရ. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မှဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ဖြစ်ခြင်းသင်အတူတကွပိုမိုသင့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကူညီပေးပါမည်နှင့်သင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအဲဒါကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်. ဒီတော့ပိုကောင်းအခုသင်ညာလေ့ကျင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်?
ငါးပါးအကြံပေးချက်များနွေရာသီလအတွက်သင့်ရဲ့မေတ္တာကိုဆရာကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သင့်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကြစို့. သင်ဟာသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်သည်အဘယ်မှာရှိသန်းကာလ "ဟုမေးမြန်းခံရပါလိမ့်မယ်?"နှင့်" သင်နေဆဲ what's-သူမ၏အမည်နှင့်ချိန်းတွေ့နေကြတယ်?ငါသည်သူ့ကိုသူ / သူမနှင့်အတူအမြဲမပြတ်ဆက်သွယ်ရယ်, မိမိတို့အိမ်မှာလက်ရှိတွင်င် "ယခုမူကား, သင်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြေဆိုနိုင်သည်" "နှင့်" ဟုတ်ကဲ့, သင်သည် "ငါဖြစ်၏အလောင်းအစား.